Julen Lopetegui oo ammaanay Man United kahor kulanka ay isku wajahayaan wareega afarta ee tartanka Europa League – Gool FM
(Yurub) 12 Agoosto 2020. Tababaraha reer Spain iyo kooxda Sevilla ee Julen Lopetegui ayaa ammaanay naadiga Manchester United, wuxuuna ku tilmaamay inay tahay kooxda ugu weyn adduunka.
Sevilla ayaana afar dhammaadka tartanka Europa League kula ciyaari doonta naadiga Manchester United, kaddib markii ay kaga soo adkaatay kooxda Wolverhampton 1-0, kulan aad u xiiso badnaa ay ku wada ciyaareen garoonka Schauinsland-Reisen-Arena ee dhaca dalka Germany.
Haddaba Julen Lopetegui ayaa ciyaarta kaddib wuxuu ammaanay kooxda Manchester United ay isku wajahayaan wareega afar dhamaadka tartanka Europa League, wuxuuna yiri:
“Waxaan kulanka soo soo socda la ciyaari doonnaa Manchester United, waa kooxda ugu weyn adduunka, balse diyaar ayaan u noqon doonaa iyaga”.
“Waxaan diirada saareynaa kulankeena soo socda, oo aan ka hor imaaneyno koox leh taariikh fiican, waxay ku jiraan heer aad u sareeya”.
“Waxaan soo bandhigi doonaa inta aan awoodno, sida aan had iyo jeer u sameysanno, waa wax adag inaad ka hor timaado Manchester United, laakiin waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan karno”.
Intaas kaddib Julen Lopetegui ayaa wuxuu ka hadlay guusha ay ka gaareen kooxda Wolverhampton wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaartoydeyda, sababtoo ah waxaan la ciyaarnay koox weyn, waxaan u baahneyn inaan kubadda heysano, isla markaana aan sameynin qaladaad, sababtoo ah waa koox dhaqsi badan”.